ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးသန်းေ႟ြ အ္ဋိံိယ နည်းပည္ဘာမိြႚတော်သိုႛ ရောက်ရြိ
ူမန်မာစစ်အစိုးရခေၝင်းဆောင် ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီး သန်းေ႟ဟြာ အ္ဋိံိယိံိုင်ငံ ခရီးစဉ် နောက်ဆုံး တထောက်အူဖစ် ္ဘမိြႚတော် နယူးဒေလီကနေ ဇူလိုင် ၂၈ ဒီကနေႛမြာ အ္ဋိံိယိံိုင်ငံရဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ ္ဘမိြႚတော်ူဖစ်တဲ့ ဟိုက်ဒရာဘတ်ကို ရောက်ရြိတယ်လိုႛ အ္ဋိံိယက လာတဲ့ သတင်းတေကြ ရေးသားပၝတယ်။
ဗိုလ်ခဵြပ်မြြးဋ္ဌကီးသန်းေ႟ဟြာ ဇူလိုင် ၂၇ ရက် မနေႛက နယူူးဒေလ္ဘီမိြႚမြာ အ္ဋိံိယဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် မာမိုဟန်ဆင်းနဲႛ တြေႚဆုံခဲ့္ဘပီး သဘောတူ စာခဵြပ် ၅ ခုကို လက်မြတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။
ူမန်မာိံိုင်ငံနဲႛ အ္ဋိံိယ အရြေႚေူမာက်ူပည်နယ် မီဇိုရမ်တိုႛအုကား ကားလမ်းဖောက်ရေး အတြက် အ္ဋိံိယိံိုင်ငံက အမေရိကန်ဒေၞလာ သန်း ၆၀ အကူအညီ ပေးခဲ့သလို အ္ဋိံိယအစိုးရပိုင် အ္ဋိံိယ သြင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဘဏ် Exim ဘဏ် ကလည်း ူမန်မာိံိုင်ငံက မီးရထားလမ်း တည်ဆောက်ရေး အတြက် အမေရိကန်ဒေၞလာ သန်း ၆၀ ထုတ်ခေဵးခဲ့တယ်လိုႛ ဆိုပၝတယ်။
အ္ဋိံိယအစိုးရနဲႛ ူမန်မာစစ်အစိုးရအုကား ဇူလိုင် ၂၇ မနေႛညနေပိုင်းက ထုတ်ူပန်တဲ့ ပူးတြဲေုကညာခဵက်မြာ အ္ဋိံိယဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ်က ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ကဵယ်ူပန်ႛ္ဘပီး အသေးစိတ်ကဵတဲ့ အမဵိြးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်နဲႛ ဒီမိုကရေစီ ေူပာင်းလဲရေး လုပ်ငန်းတေရြဲ့ အရေးပၝမကြို အလေးအနက်ထား ေူပာခဲ့တယ်လိုႛ ဖော်ူပထားပၝတယ်။
အ္ဋိံိယိံိုင်ငံဟာ ူမန်မာိံိုင်ငံက ရေနံနဲႛ သဘာဝဓာတ်ငြေႚ သယံဇာတ အရင်းအူမစ်တေကြို တ႟ုတ်နဲႛအ္ဘပိြင် ဝယ်ယိူံိုင်ဖိုႛအတြက် မ္တေွာ်လင့်တယ်လိုႛ အမဵားက ဝေဖန်ခံနေရ္ဘပီး ူမန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ လူအခြင့်အရေး ခိဵြးဖောက်မြတေကြို လဵစ်လဵြ႟္ဘြပီး တ႟ုတ်နဲႛ အူပိြင် ူမန်မာအပေၞ ုသဇာ လြမ်းမိုးိံိုင်ရေး ဋ္ဌကိြးပမ်းနေတဲ့အတြက် ိံိုင်ငံတကာ လူႛအခြင့်အရေးအဖြဲႚတေကြ ဝေဖန်နေုကပၝတယ်။
Myanmar is trying the best, let's understand it, support. No one is perfect.
Jul 29, 2010 01:37 AM